बन्ध्याकरणपछि पनि गर्भ रहन सक्छ - टिप्स - साप्ताहिक
बन्ध्याकरणपछि पनि गर्भ रहन सक्छ
- डा. बालकृष्ण साह
माघ २५, २०७२
म ४० वर्षीया महिला हुँ । मेरा ३ सन्तान छन् । कान्छो सन्तानको जन्मपछि मैले स्थायी बन्ध्याकरण गराएकी थिएँ । तैपनि विगत २ महिनादेखि मेरो महिनावारी रोकिएको छ ? मलाई गर्भ रह्यो कि भन्ने डर लागिरहेको छ । बन्ध्याकरणपछि पनि गर्भ रहन सक्छ ?
महिनावारी रोकिने प्रमुख कारण गर्भ रहनु हो, तर गर्भ नरहेको अवस्थामा पनि महिनावारी रोकिन सक्छ । बन्ध्याकरण सही तरिकाले गरिएको अवस्थामा गर्भ रहने सम्भावना निकै कम हुन्छ ।
तपार्इंको बन्ध्याकरण कहिले भयो, पत्रमा उल्लेख गरिएको छैन । तपाईंको उमेर ४० वर्ष मात्र रहेछ । ४० वर्षमै महिनावारी सुक्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ तर सुक्दैन भन्न मिल्दैन । यसबाहेक महिनावारी रोकिनुका पछाडि पाठेघर तथा हार्मोनहरूमा देखा पर्न सक्ने गडबडीहरू पनि कारण हुन सक्छन् । एकपटक स्त्रीरोग विशेषज्ञसँग परीक्षण गराउनुहोला ।
प्रकाशित :माघ २५, २०७२
क्रिसमस इभको पार्टीमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, पारस पनि सँगै देखिए
म कुशल तबलावादक पनि हुँ
म तथ्यांक शास्त्रको प्राध्यापक पनि हुँ